Howlgallo Raaf ah oo ka billaabanaya Mareykanka | Biyoguurenews.com
Home Wararka Howlgallo Raaf ah oo ka billaabanaya Mareykanka
Howlgallo Raaf ah oo ka billaabanaya Mareykanka
Saraakiisha socdaalka ee Maraykanka ayaa qorsheynaya in dalkaasi ay maanta ka fuliyaan hawlgallo ka dhan ah dadka soogalootiga ah ee sida sharci darrada ah kusoo galay wadankaasi.
Madaxweyne Trump ayaa xoogga saaray wax ka qabashada muhaajiriinta sharci darrada ku gala wadankiisa, balse dadka soogalootiga ah ee Maraykanka uga soo tillaaba xuduudda Mexico ayaa gaaray heerkii ugu sarreeyay bilihii la soo dhaafay.
Kooxaha u ololeeya dadka soogalootiga ah ayaa sheegay in hawlgalka uu walaac badan ku abuuray muhaajiriinta, waxaana sidoo kale dhaliilay xisbiga mucaaradka ah ee Dimuqraadiga.
Qulqulka soogalootiga ka imanaya Bartamaha qaaradda Ameerika ee dhanka Mexico kasoo galaya Maraykanka ayaa aad uga caraysiiyay madaxweyne Donald Trump.
Bishii May oo keliya in ka badan 144 kun oo muhaajiriin ah ayaa lagu xiray xuduudda Mexico, tiradaasi oo noqotay tii ugu badneyd ee hal bil ah la diiwaangeliyo 13-kii sano ee la soo dhaafay.
Xarumaha dadka lagu hayo ayaa buux dhaafay, waxaana meel ay iska gaaraan la’ ilaalada xuduudaha ee Maraykanka.
Hawlgalka maanta oo lagu wado inuu ka dhaco sagaal magaalo ayaa looga gol leeyahay in loogu xoog sheegto muhaajiriinta, sida uu Trump sheegayna, waxaa Maraykanka laga saari doonaa malaayiin qof oo si sharci darro ah halkaa ku tegay.
Haseyeeshee wararka qaar ayaa sheegay in hawlgalkan lagu beegsan doono laba kun oo qof kuwaasoo loo jaray warqadihii lagu tarxiili lahaa, waxaana suuragal ah in lagu soo qabto dad aan ka badneyn laba boqol oo qof.
Madaxweyne Trump ayaa bishii hore shaaciyay hawlgalkan, balse waxa uu baajiyay markii uu codsi uga yimid xisbiga Dimuqraadiga.
Balse horumar laga samayn waayay shuruucda magangelyo siinta muhaajiriinta ee Maraykanka ayaa soo cusbooneysiiyay qorshahan, waxaana khubarada ay tilmaamayaan in dadka la beegsanayo ay u badan yihiin kuwo dalalkooda uga soo cararay in la xiro.
Previous articleBderbera Daawo Klafadhigii 20 aad e golaha degaanka berbera iyo arimo muhiima oo lagag dooday
Next articleTrump oo heshiis caalami ah ka baxay ‘isaga oo ku xumeeynaya Obama